Home Wararka Kooxo bistooladley ah ayaa degmada Dharkeenley ku dilay sargaal ka tirsan ciidanka...
Kooxo bistooladley ah ayaa degmada Dharkeenley ku dilay sargaal ka tirsan ciidanka DFS
Kooxo biskoolado ku hubeesan ayaa xaafad katirsan degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir waxa ay ku dileen sargaal la sheegay in uu katirsanaa ciidanka xoogga Soomaaliyeed .
Sargaalka la dilay oo magaciisa lagu soo koobay Cabdi Dheere ayaa la dilay xilli uu garaash kala soo baxayay gaari uu lahaa, waxaana dilka kaddib goobta ka baxsaday kooxdii dilka geestay oo dhalinyaro lagu sheegay.
Ciidamo katirsan booliiska Soomaaliya ayaa gaaray goobta uu dilku ka dhacay , waxa ayna ciidamada halkaasi ka sameeyeen howlgalo aan lagu soo qaban kooxdii dilka u geesatay sargaalka katirsanaa ciidanka xoogga dalka.
Magaalada Muqdisho ayaa maalmahan waxaa kusoo batay dillaka qorsheesan ee loo geesto dadka shacabka ah iyo askarta katirsan ciidanka dowlada, waxaa sidoo kale magaalada ka dhaca mararka qaar qaraxyo.
Previous articleAl-Shabaab oo la sheegay in sanad walba ay Malaayiin doolar hub ku iibsadaan
Next articleC/rashiid Xidig oo kusoo baxay doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo
Wararkii ugu dambeeyay mooshinka la hor geeyey baarlamaanka Somaliland?